minisiteran’ny tanora sy fanatanjahantena sy ny minisiteran’ny fahasalamana ary ny minisiteran’ny mponina Malagasy nanatontosa. Nahatratra 3000 isa tany ho any ireo nandray anjara tamin’ny hetsika ka ny 50 tamin’ireo dia atltleta manana taratasy filalaovana ara-dalàna ary ny 30 hafa dia pasitera ao amin’ny Foiben’ny Fiangonana Advantista eto Afovoany avokoa notarihan’ny Pasitera Ratsarasaotra Paul mpandrindra ny hetsika. Nanampy teo amin’ny fanatontosana kosa ny teknisianina 2 avy ao amin’ny FMA “Federasiona Malagasin’ny Atletisma”. 10 km niainga teo Mahamasina nihazo an’Ampasika sy 5 km nanodidina ny farihin’Anosy sy ny kianjan’i Mahamasina no notanterahina ka nizarana amboara sy medaly an’ireo mpandresy isanisany. Natao ity hetsika ity, hoy ny Pasitera Ratsarasaotra Paul mba hitaizana ny tanora tsy horebireben’ny filan-dratsy samihafa sy mba hahazoana fahasalamana ho an’ny rehetra ihany koa.